तिनाउको विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरोको प्रकोप | Butwal Dainik
तिनाउको विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरोको प्रकोप
तिनाउ गाउँपालिकाको धेरै जसो भुभाग कमजोर जमिन भएको चुरे क्षेत्रमा पर्दछ । त्यसैले बर्षादको समय जोखिमपूर्ण रहेको छ । अहिलेको १ हप्ता सम्मको झरीको कारण विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोले क्षेती पु¥याएको छ ।
वडा १ कचलमा रानीवगीया झिगामारा कचल मोटर बाटो र दोभान कचल मोटर बाटो पहिरोले बन्द भएको छ तर ओखलढुंगा अंकुसे धुस्टुङ बतासे मोटर बाटो सुचारु रहेको छ । वडा नं. २ को दोभान बजार र घोडेवास वीचमा पर्ने मोटरबाटो मा ठुलो पहिरो झरेको छ । पासकुण्डा र बुढासयक बीचको मोटरबाटो कचलखोलाले पिँध हानेकाले भासीएर मोटरबाटो बन्द भएको छ । खुर्साने निर तलको पिधखोलाले हानेकाले पहिरो गएर बाटो अवरोध भएको छ । खुर्साने र खानी बिचको बाटो भासिएको छ । यो बाटो सञ्चालन गर्न एक हप्ता डोजर लगाउनु पर्ने देखिन्छ । थानि डाँडा मा.वि. विद्यालय भवन पहिरोले धरापमा परेको छ । दोभान नुवाकोट बेलवार बैकल्पिक मार्ग पहिरोले अवरोध छ । सुकेतालको १ घर रुख ढलेर भट्काएको छ वाड नं. ३ मा पर्ने सिद्धबाबा मन्दिर परिसर पहिरोले क्षतीग्रष्त छ ।
दोभान चौकी निर बारम्बार पहिरो खसिरहेको छ । पानिमिलबाट सिरि डाँडा सम्म अर्घाखाँची सिमेन्ट् प्रालिको पहुचमार्गमा ठुलो पहिरो जाने सम्भावना रहेको छ । जमिन भासिएर डाँडै खस्ने सम्भावना भएकाले पानिमिल स्थित ३० घर जोखिममा परेको र पानि परेकोवेला घर छोडेर जानुपर्ने अवस्था भएको छ । झुम्सा चौकीभन्ज्याङ् मोटरबाटो बैकल्पिक् बाटोको रुपमा प्रदेश सरकारबाटो खनिरहेको र उक्त बाटोको कारण चौकी भन्ज्याङ् निरको फुलबारी गाउँमा बाढीपहिरो पसेर क्षती पु¥याएको छ ।
तिलोत्तमा मा.वि. निरबाट पहिरो जाँदा सामुदायिक भवन र पौवा पहिरोले बगाएको छ । बेलडमारमा एक घर पहिरोको जोखिममा परेको छ । वाड नं. ४ सत्यवतीको मोटरबाटो सबै तिरबाट बन्द भएको छ । गीजीनचौर, नेवोघाटमा पहिरो गई केहि घरहरु जोखिम्मा परेका छन् । वडा नं. ५ को कोलडाँडा, विस्कुनडाँडा र मरामकोटको मोटरबाटो पहिरोले अवरोद्ध भएको छ । केहि घरहरु पहिरोको जोखिममा छन् । वडा नं. ६ मस्यामको चिदिस, वेलडाँडा, सिखरडाँडाको बाटो तथा बाटाका घरहरु जोखिममा परि बाटो अवरोद्ध छन् । लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयलाई पहिरोले कुनातर्फ पूरेको छ । कोसटोलको २ घर विस्थापित् भएका छन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष ओम बहादुर घर्ती मगर, उपाध्यक्ष दमयन्ती थापा, प्रवक्ता राजेश श्रेष्ठ, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दामोदर भन्दारी समेतको टोली बाढीपहिरोले क्षती भएको स्थान अवलोकन गरि तत्काल त्रिपाल वितरण गरेको, विस्थापित परिवारलाई व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको र वर्षाकम भए पछि पहिरो रोकथामको लागि तारजाली वितरण पर्खाल निर्माण तथा संरचना मर्मत संभारगर्ने गाउँ पालिका अध्यक्ष ओम बहादुर घर्ती मगरले जानकारी दिनु भयो ।